विचित्र संसार : जहाँ सार्वजनिक स्थलमा यौन सम्पर्क गर्नु सामान्य मानिन्छ | Rajmarga
एजेन्सी। शारीरिक सम्बन्ध बनाउने कुरा सुनेर आज पनि मानिसहरु असहज महशुस गछन्। तर विश्वमा अहिले पनि यस्ता पनि देश छन्, जहाँ यौन सम्पर्क गर्नु परम्परा नै हो। यहाँ सम्बन्ध स्थापित गर्न विचित्रका नियम छन्। जसलाई विश्वास गर्न मुश्किल हुन्छ। आज डिसी नेपालले तपाइँलाई यस्ता केही देशका बारेमा जानकारी दिँदैछ। जहाँ यौन सम्पर्कका विषयमा विचित्रको परम्परा प्रचलित छन्।
शारीरिक सम्बन्धलाई लिएर दक्षिण प्रशान्त महासागरको मंगिया द्वीपमा पनि विचित्रको प्रचलन छ। उहाँ १३ वर्षका बालकले आफूभन्दा धेरै उमेरकी युवतीसँग यौन सम्बन्ध राख्नुपर्छ। त्यसपछिको कारण के हो भने नवयुवक भविष्यमा आफ्नो पार्टनरलाई खुशी राख्ने तरिका सिकोस भन्ने हो।
इण्डोनेशियाको बाली द्वीपको माउन्ट केमुकुसमा वर्षका एक पटक अनजान व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क गर्ने महोत्सवको आयोजना गरिन्छ। अनजान व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क गर्ने व्यक्ति खुशी हुने र उसको मनको इच्छा पूरा हुने विश्वास गरिन्छ।
इरानमा पनि विचित्रको परम्परा छ। यहाँ तपाइँलाई जुन महिलासँग यौन सम्पर्क गर्ने हो त्यही व्यक्तिसँग विवाह गर्नुपर्छ। तर यो युवती तयार भएपछि मात्रै संभव हुन्छ। यदि युवती तयार भइन् भने युवकले उनलाई केही पैसा पनि दिनुपर्छ। यसो गर्दा महिला केही दिनकालागि युवकसँग श्रीमतीका रुपमा बस्न सक्छिन्।
अष्ट्रेलियामा एक जनजाति मार्डुडजारामा पुरुसत्व प्राप्त गर्नकालागि आफ्नो गुप्तांग काट्ने परम्परा छ। यो परम्परा अनुसार पुरुषले आफ्नो लिंगको माथिल्लो भाग काटेर खानुपर्छ। त्यसपछि लिंगमा भएको घाउ भरिएपछि धारिलो हतियारले घाउ चिर्नुपर्छ।
नाइजेरियामा यौन सम्पर्क गर्नकालागि एक मेलाको आयोजना गरिन्छ। यसमा पुरुष र महिला तयार भएर आउँछन्। त्यसपछि जो जोसँग यौन सम्पर्क गर्ने हो उनीहरुलाई आफ्नो मन परेको ठाउँमा जान सक्छन्। यो मेलामा पुरुषले अर्काकी श्रीमतीलाई पनि लैजान सक्छन्। यो परम्परालाई निकै राम्रो मानिन्छ।
अन्य मुलुकमा सम्बन्ध स्थापित गर्न उमेर तय गरिन्छ। तर पपुवा न्यु गिनीको ट्राब्रिएन्डर्स जनजातिमा केटा ६ देखि ८ वर्षको उमेरमा नै यौन सम्पर्क गर्न सुरु गर्छन्। जबकि यहाँका युवती १२ वर्षदेखि यो काम गर्न सुरु गर्छन्।
इजिप्टमा केही समुदाय यो धर्ती एटम नामका भगवानले बनाएको कुरामा विश्वास गर्छन। उनीहरुका अनुसार इजिप्टको फरोह पनि नील नदीमा हस्तमैथुन गर्ने गर्थे। यहाँका पुरुष आफूलाई सन्तुष्ट बनाउन एवं इजिप्टका राजाको यौन क्षमता राम्रो बनाउन सार्वजनिक स्थानमा हस्त मैथुन गर्नेगर्छन।
प्राचीन ग्रीसमा बासेक्सुअल र गे लभ सामान्य थियो। यहाँ एक वयस्कको किशोर युवकसँग यौन सम्पर्क गर्नु सामान्य थियो। यहाँ वयस्क मानिसलाई इरास्टेस (आफू भन्दा कम उमेरको युवक) भनिन्छ।
Previous post: बाथरुममा भयो यस्तो घटना, सत्य सामने आएपछि तोडियो १२ वर्षको प्रतिबन्ध
Next post: नीति तथा कार्यक्रमः दोब्बर आर्थिक वृद्धिदेखि रेलमार्गसम्म, कति सम्भव, कति असम्भव ?
नेपालको सीमा नजिकै २५ रुपैयाँमा २० मिनेट युवती भाडामा
यी सुन्दरीले आफैंले गरिन खुलासा, … हुन् उनी, धैर्यपूर्वक पढ्नुस्
गर्भवती किशोरीलाई मारेर उनको पेट चिरी गर्भको शिशु चोरी !
समुद्रबाट माछा उफ्रेर घाँटीमा छिरेपछि..